“लोकप्रिय संचारकर्मि रबि लामिछाने टिम बैतडी प्रस्थान .. भागीरथिको न्यायको लागि बैतडी मा… – yuwa Awaj
“लोकप्रिय संचारकर्मि रबि लामिछाने टिम बैतडी प्रस्थान .. भागीरथिको न्यायको लागि बैतडी मा…
माघ २७, २०७७ मंगलबार 1
“बैतडी” “बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका–७ को चडेपानीमा त्यस्तै घटना भएको छ । अहिले पुरै गाउँ शोकमा डुवेको छ । गाउँकी होनहार किशोरी भागरथी माथि भएको घटनाले गाउँलेका आँखाबाट पनि अविरल आँसु बगिरहेका छन। उनीहरुका आँसु रोकिएका छैनन्।
“भागरथीले सबैलाई चटक्कै छोडेर गएको पत्यार लागिरहेको छैन। तर लवलेक सामुदायिक वनको बनमाराको झा डी मा भगीरथीको शव फेला परेको थियो । उनको शवको प्रकृति हेर्दा पनि निर्मला पन्तकै जस्तो घटना भएको प्रहरीले अनुमान गरेको छ । उनको कपडा च्या ति ए का छन् भने श रि र मा पनि डा म देखिएका छन् ।
“स्कूलवाट घर फर्कदा, भगिरथी हराएकी थिइन् । घटनास्थलमा उपस्थित प्राय सबैका आँखा रसाएका थिए। स्थानीय सनातन धर्म माध्यमिक विद्यालयबाट बुधबार घर फर्किने बेला नै सम्पर्क विहीन भएकी भागरथीको विषयको अपत्यारिलो खबर उनीहरु सबै स्वीकार्न विवश छन्। पति वियोगको आँसु नथामिदै छोरी गुमाउन पुगेकी द्रोपतीले त्यतइ ठूलो चो ट सहन सकिनन् ।
“बुधवार हराएकी छोरी घर फर्कली भन्ने आश गरेर बसेकी आमाले सहनै नसक्ने घटनाको सामना गर्नुपरेको छ । बिहीबार साँझ छोरीको मृत्युको खबरपछि उनी बेहोस नै भइन्। सुगरका बिरामी श्रीमानलाई गुमाएपछि साहारा बनेकी छोरी सदा सदाका लागि छोडेर गएपछि उनलाई बोलाउँदै घरी–घरी भक्कानिन्छिन्।
“वुवाको नि,धन पछि परिवारको आर्थिक जिम्मेवारी थपिएपछि उनका छोरा भर्खर भारत कमाउन गएका थिए । बहिनीको घटना थाहा पाएपछि उनी पनि फर्कदै छन् । ठुलो मान्छे बनाउने धोको राखेर पढाइरहेकी छोरी बुढेसकालको सहारा बन्ला भन्ने सोचेकी उनले कलिलैमा यसरी छोडेर जालिन् भन्ने सोचेकै थिइनन् । गाउँका अरु महिलाहरुले द्रोपतिलाई सम्हाल्ने कोसिस गरिरहेका छन्। रोजगारीका सिलसिलामा भारतको दिल्लीमा रहेको जेठो छोरा फर्किरहेको छ। घर खर्च चलाउन र बहिनीको पढाई खर्च जुटाउन समस्या भएपछि नै कक्षा १० मा पढ्दापढ्दै उनी भारत पसेका थिए।
बु,वाको किरियामा बसेकी ,आमालाई भागरथीले नै घरको सबै काममा सघाउने गरेकी थिइन्। तर उनको खुसीमाथि कुन पापीले आँखा लगायो । भागरथीको ब-ला ‘त्का-र पछि ह’ ‘त्या भएको आशंकामा प्रहरीले अनुसन्धान कार्य गरिरहेपनि न्याय पाउनेमा विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।
रबि लामिछानेको स्ट्याटस :भागरथीको न्याय को निम्ति उठिरहेका आवाजहरुलाई थप बल मिल्छ कि भन्दै बैतडी तर्फ जादैछौ।अबका अपडेटहरु, केही समयकालागि फेसबुक बाटै.. अरू केहिपनि जान्दैनौं,न्याय नपाई मान्दै मान्दैनौं।
“यो भिडियो पनि हेर्नुस् भागरतीको न्यायको लागी ज्वालाको अग्निज्वाला। भिडियो ।।
Prevभावी प्रधानमन्त्रीको दावेदारी प्रस्तुत गरेका प्रचण्ड भन्छन् : हामी पदका लागि लडेका होइनौं
Nextखनालको नेतृत्वमा देश होइन, गाउँ पनि बन्दैन (सहि की गलत)
नेकपा फुटाएर नेपाललाई प्रधानमन्त्री र प्रचण्डलाई एकल अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव…हेर्नुहोस् ।
हाम्रै घर अगाडी रहेको यो झाडीको महत्वबारे कसैलाई थाहा छैन। यति धेरै रोगहरुको लागि फाइदाजनक हुन्छ…हेर्नुहोस् ।
कोरोना खोपको परीक्षणमा ठूलो सफलता, विज्ञान र मानवताको लागि महान दिन बन्ने संकेत…हेर्नुहोस् ।
रोकिएको कोरिया जाने प्रक्रिया तत्काल शुरु हुँदै…हेर्नुहोस् ।
६.	जसले खाटमै पल्टिएर व्यवसाय चलाए, करोडौंको सम्पत्ति कमाए (13)
७.	लुम्बिनीमा नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा मतदान गर्न जसपाको ह्वीप (13)